Tsipy kanetibe - Lalao eran-tany :: Hisolo tena ny Malagasy any Cambodge indray i Hasina sy Mirana • AoRaha
Tsipy kanetibe – Lalao eran-tany Hisolo tena ny Malagasy any Cambodge indray i Hasina sy Mirana
Handray anjara amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny tsipy kanetibe any Cambodge ihany ny delegasiona malagasy na dia teo aza ny olana amin’ny fitantanana ny taranja. Voahosotra ho tompondakan’ i Madagasikara 2019 fanindroany ho an’ny sokajy vehi­vavy olon-droa i Hasina sy i Mirana (3 FB), omaly tany Antsirabe, rehefa nandavo an’i Tsiory sy Fetra (CBT) tamin’ ny isa 13 noho 1 sy 13 noho 8. Handrafitra ny ekipam-pirenena ho any Cambodge, araka izany, amin’ny 18 ka hatramin’ny 24 novambra ho avy izao izy roa vavy. Fandrai­sana anjara fanindroany amin’ ny sehatra maneran-tany.
Nanambara i Hasina fa “hiezaka ny haka ny medaly volamena izay lasan’ny Frantsay izahay amin’ity taona ity. Hatao mafimafy ny fanazarantena mba tsy hio­nona amin’ny medaly vola­fotsy toy ny tamin’ny farany”. Marihina fa tompondakan’i Madagasikara indroa ihany koa izy roa vavy ireto (2017 sy 2019). Ho fantatra afaka telo andro kosa ireo mpilalao roa vavy hanampy azy ireo amin’izany lalao maneran-tany izany.
Naivo sy Iarotiana (Pac) kosa no nahazo ny anaram-boninahitra tamin’ity taona ity ho an’ny sokajy “junior” lehilahy olon-droa. Nandavo an’i Aina sy David (CBT) tamin’ ny isa 13 noho 9 izy ireo tamin’ny lalao famaranana.
Fanatanjahantena sy asa :: Hitohy hatrany Mahajanga ny seminera ho an’ireo tanora
Baolina kitra – “CHAN 2020” :: Tonga eny Carion avokoa ireo mpilalao valon’ny Fosa Juniors FC